Android 10: Mmalite nke ọhụụ ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga ọ kwadoro na Google ga-akwụsị iji aha eji megharịa ọnụ na aha OS. Maka nke a, gam akporo Q ghọrọ naanị Android 10. Mgbanwe dị mkpa, mgbe ọtụtụ ọnwa nke asịrị banyere aha na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ga-enwe. Ọbụna ụlọ ọrụ o kwetara na o nweghi aha a họọrọ.
Finalmente ahọrọla mgbanwe nke usoro n'ụzọ nke a. Gam akporo 10 bu uzo oma nye aha desserts na mbido uzo ohuru nke ulo oru a. Ọ nwere ike ịdị ka obere nzuzu, mana mgbanwe aha a na-anọchite anya karịa ọtụtụ ndị na-eche.
Aha mgbanwe abụrụla ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị ọrụ. Google ekwughi ihe obulaMana nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ihe kpatara ya mere o ji hapụ anyị ịgbanwe aha anyị. Ya mere, anyị na-enyocha akụkụ ụfọdụ dị mkpa na nke a.
1 Ka m jiri aha gị megharịa ọnụ
2 Android 10: Usoro dị mfe
Ka m jiri aha gị megharịa ọnụ
Kemgbe mmalite gị, site na mbipute 1.5, A na-eji aha eji megharịa ọnụ na sistemụ arụmọrụ. Kemgbe ọtụtụ afọ anyị gafere Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwitch, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, and Pie. Ha niile bụ nsụgharị ndị jirila aha eji megharịa ọnụ ruo ọtụtụ afọ. Offọdụ n'ime ha kpara ọtụtụ ndị ọrụ.
N'afọ a Google na-eche ọtụtụ nsogbu ihu. N’aka nke ozo, ihe isi ike ichota desser nke bidoro na mkpuru edemede Q, nke na asusu bekee bu ihe adighi adi. Ke adianade do, obi abụọ banyere kedu usoro ị ga-eji mee ihe ozugbo ekpuchichara mkpụrụedemede niile ọ bụ nkọwa ọzọ mere ka e nwee obi abụọ. Ya mere, maka ụlọ ọrụ ahụ, oge eruola maka mgbanwe, nke rụpụtara iji gam akporo 10 dị ka aha ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ.
Aha nke ụfọdụ na-agwụ ike, na-efunahụ ụfọdụ agba na ọ joyụ, mana nke na-anọchite anya mmalite nke ọhụụ ọhụrụ maka gam akporo. Ọtụtụ ndị na-ahụ na gam akporo 10 bụ Nzọụkwụ mbụ na ntozu nke sistemụ arụmọrụ, emechaa ghọọ dimkpa. Mgbe ihe karịrị afọ iri gachara n'ahịa, oge ahụ abịarute sistemụ arụmọrụ.
Android 10: Usoro dị mfe
N'aka nke ọzọ, sistemu ọhụrụ a nke Google ga-eji site ugbu a gawa ọ dịịrị ndị ọrụ mfe. Aha eji megharịa ọnụ, ọ bụ ezie na ọ bụ nke mbụ na ọ nwere ike bụrụ ihe ọchị, na-agbagwoju anya. Ihe kwesiri ekwesi bu na a na - ama nsụgharị site na nọmba so ya. N'ihi nke a, aha ndị a mere ka o doo ụfọdụ ndị anya ụdị ha na-ekwu maka ya. Android 10 gbanwere nke a. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ama ụdị nke a na-ekwu maka ya ma ọ bụ nke a ga-enweta mgbe mbipute ga-eru.
A mara ya ozugbo ụdị sistemụ arụmọrụ bụ nke anatara ma ọ bụ nke a na-ekwu maka ya. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere ka mmelite ahụ dokwuo anya, ebe ọ bụ na a ga-eji ọnụ ọgụgụ mee ihe na ha. Ya mere, Google nwere nzọ na jiri sistemụ dị ka nke Apple jiri kemgbe ọtụtụ afọ na iOS, nke ejiri nọmba. Betgba nzọ nke dị mfe, dị mfe ma zere ọtụtụ ọgba aghara ma ọ bụ obi abụọ n'etiti ndị na-azụ ahịa. Mfe dị mfe ugbu a bụrụ otu n'ime ndị ezigbo ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na mbata nke gam akporo 10 na ahịa.
Na mgbakwunye, ọtụtụ na-ahụ na aha gam akporo 10 nwere ezi uche, ịhụ uto na mgbanwe nke sistemụ arụmọrụ anọwo na-etinye ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ. A mara ya iji guzobe onwe ya n'ahịa ahụ, nwere ọtụtụ nde ndị ọrụ yana ọ kara nka tozuru etozu. Yabụ, aha ahụ ga-adabakwa na ọnọdụ ya na steeti sistemụ ya oge niile. Nke a bụ ihe site na ugbu a ụlọ ọrụ gosipụtara nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Gam akporo 10: goodbye na-eji megharịa ọnụ aha na gam akporo okè
Meizu 16S Pro ejirila Geekbench weghaara ya na ụfọdụ nkọwa ya